राजधानीमा मिस नेपाल पिसको अडिसन सुरु - Glamour Nepal
सौदर्य प्रतियोगीता ‘मिस नेपाल पिस २०७४’को प्रारम्भिक अडिसन सुरु भएको छ। राजधानीको पुतलिसडक स्थित युनिक्याम्प ग्लोबल इलजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा आइतबार आयोजित प्रारम्भिक अडिसनमा नर्स तथा नर्सिङ कलेजमा अध्यायनरत ७० युवतीको सहभागीता रहेको थियो। अडिसन अझ दुइ साता सम्म चल्नेछ। अन्तिम अडिसनपछि मात्र छानिएका प्रतियोगी सार्वजनिक गर्ने आयोजक को भनाई छ।
अस्मी श्रेष्ठ (मिस नेपाल २०१६), रोजीन शाक्य (कोरियोग्राफर), डा. सुजिता हिराचन्द, सनम थापा मगर (मिस नेपाल पिस २०७३), डा. लोचन कार्की लगायत प्रारम्भिक चरणको अडिसनमा निर्णायक रहेका थिए। ‘मिस नेपाल पिस’ शान्तीको सन्देश फैल्याउने प्रतिबद्धताबोकेको मिस नर्सको परिमार्जित प्रतियोगीता हो प्रतियोगीताको विजेताले ‘मिस वल्र्ड पिस’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने न्।
‘सशक्त महिला सवल राष्ट्र’ भन्ने नारा उठाएको यो स्वास्थ्य पेसासँग सम्बन्धित एक मात्र सामाजिक सौदर्य प्रतियोगिता हो। जसको आवेदन केही अगाडि खुल्ला भएको थियो। नसिङ पेसा रहेका, अध्यायन गरिरहेका ब्याक्तिको ब्यक्तित्व बिकाश गरि सामाजिक काम प्रति उत्तर दाइत्व बहन गराउँने उदेश्यले प्रतियोगीता आयोजना हुँदै आएको छ। प्रतियोगीतामा शिर्ष सहित आधा दर्जन बिभिन्न शिर्षकका बिजेता छानिनेछन्।